Beddelka TeamViewer ee gargaarka fog 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
TeamViewer shaki la'aan waa barnaamijka caawinta fog ee adduunka loogu isticmaalo, sidoo kale waxaa mahad leh waxqabadkeeda aan caadiga aheyn ee dhammaan xaaladaha shabakadaha (xitaa shabakadaha ADSL ee gaabiska ah waxay u shaqeysaa dhibaato la'aan) waxayna ku mahadsantahay shaqooyin badan oo dheeri ah sida wareejinta faylka fog. iyo cusbooneysiinta tooska ah ee fog (waxtar u leh cusbooneysiinta barnaamijka xitaa kumbuyuutarrada isticmaalayaasha layliska). Nasiib darrose, Nooca bilaashka ah ee TeamViewer waxaad leedahay xuduudo waaweyn: suurtagal maaha in loo isticmaalo qaab ganacsi, hubinta nooca isku xirnaanta ayaa la sameeyaa (si loo xaqiijiyo haddii aan nahay isticmaaleyaal gaar loo leeyahay) suurtagalna maaha in la kiciyo fiidiyowga ama daabacaadda fog iyada oo aan la kicin liisanka isticmaalaha.
Haddii aan dooneyno inaan ku siino kaalmo fog ama aan ku caawinno shirkadeena iyadoon bixin wax lacag ah, hagitaankan waxaan ku tusi doonnaa kan beddelka ugu fiican ee TeamViewer ee gargaarka fog, si aad ula wareegi karto kombiyuutar kasta meel fog oo aan lahayn waqti iyo waqti xadidan.
AKHRISO: Barnaamijyada desktop fog si aad ugu xirto kumbuyuutarka
Beddelka ugu fiican ee TeamViewer
Adeegyada aan ku tusi doono waxaa looga isticmaali karaa aag kasta, oo ay ku jiraan xirfadlaha: markaa kumbuyuutarada ayaan ka koontarooli karnaa meel fog iyo siiyaan gargaar farsamo adigoon bixin euro. Adeegyadan sidoo kale waxay leeyihiin xadidnaan (gaar ahaan astaamaha horumarsan) laakiin ma jiraan wax ka hortagaya taageerada. Si aan kuugu sahlanaato waxaan ku tusi doonaa oo keliya adeegyada la soo bandhigo sida ugu fudud ee loo qaabeeyo TeamViewer xitaa dadka isticmaala khibrada yar (marka laga eego aragtidan, TeamViewer wali waa hogaamiyaha warshadaha).
Beddelka ugu fiican ee TeamViewer ee aad hadda isticmaali karto ayaa ah Desktop desktop fog, waxaa la isticmaali karaa adigoo ka soo dejinaya Google Chrome dhammaan kombiyuutarrada oo aad ku dhejineyso qaybta adeegga (PC-ga la xakameynayo) iyo qeybta macmiilka (kombuyuutarkeena oo aan ka bixin doono caawimaad).
Waxaan si dhakhso leh ugu hagaajin karnaa gargaarka fog ee loo yaqaan 'Chrome Remote Desktop' adoo ku rakibaya biraawsarka 'add-on' (waxaan fureynaa goobta adeegga oo riixnaa Ku rakib kombuyuutar), nuqul ka sameynta koodhka gaarka ah ee kooxdan loo sameeyay iyo, na geeya bogga macmiilka ee kooxdeena, anoo galaya lambarka. Dhamaadka dejinta, waxaan awoodi doonaa inaan hubino desktop-ka si aan u siino caawimaad dhakhso iyo dhaqso leh! Waxaan sidoo kale ku rakibi karnaa qaybta adeegga kumbuyuutarro badan oo kumbuyuutar ah oo aan ku keydin karno boggayaga taageerada magacyo kala duwan, si aan mar walba u xakamayn karno laba ama in ka badan kombuyuutar dhibaato la'aan. Chrome Remote Desktop sidoo kale waxaa laga isticmaali karaa casriga, sida ku muuqata tusmada Desktop-ka fog ee Chrome taleefanka gacanta (Android iyo iPhone).
Iperius desktop fog
Downloader kale oo lacag la'aan ah si ay u bixiyaan gargaar fog waa Iperius desktop fog, oo loo heli karo softiweerka kaliya ee ku yaal bogga soo dejinta rasmiga ah.
Barnaamijkani waa mid xitaa la qaadan karo, kaliya bilow hawlfulinta si dhakhso leh loogu helo adeegaha iyo macmiilka macmiilkiisa oo diyaar u ah inuu isticmaalo. Si aad u sameysid xiriirka fog, ku bilow barnaamijka kombiyuutarka si loo xakameeyo, dooro eray sir ah oo ku saabsan goobta isla magaca ah, nuqul ama aan kuu sheegno lambarka lambar ee kor ku yaal oo ku qor Iperius Remote Desktop-ka laga bilaabay kumbuyuutarkeena, hoosta cinwaanka Aqoonsiga lagu xiro; Hadda waxaan riixnaa batoonka Isku xirka oo aan galno lambarka sirta ah, si aan awood ugu yeelano inaan meel fog uga xakameyno desktop-ka oo aan u siino gargaarka muhiimka ah. Barnaamijku wuxuu noo ogolaanayaa inaan xafidno ID-yada aan ku xirno sidoo kale waxay siisaa dhammaan xulashooyinka marin-u-helka aan la ilaalin karin (xulashada lambarka sirta ah ee horay loo helayaa): habkan ayaa ku filan in lagu bilaabo barnaamijka si otomaatig ah si loogu bixiyo gargaar degdeg ah.
Taageero deg deg ah oo ka socota Microsoft
Haddii aan haysanno PC leh Windows 10 sidoo kale waan ka faa'iideysan karnaa codsiga Gargaar deg deg ah, waxaa laga heli karaa liiska bilowga ee bidixda hoose (kaliya raadi magaca).
Adeegsiga qalabkan runtii waa mid aad ufudud: waxaan kufureynaa arjiyada kombuyuutarkayaga, guji Caawinta qof kale, ku gal akownka Microsoft (hadaanan haysan mid waxaan ku abuuri karnaa mid duulimaad ah bilaash), waxaanan tixgalineynaa lambarka qaadaha la siiyay. Hadda aan u tagno kombuyuutarka qofka ay tahay inuu ka soo qayb galo, furo barnaamijka Caawinta Degdegga ah oo gal lambarkayaga hawlwadeenka: habkan waxaan si buuxda gacanta ugu hayn doonnaa desktop-ka waxaanan bixin karnaa nooc kasta oo gargaar ah, iyadoo aan la xadidnayn waqtiga. Habkani wuxuu isku daraa xawaaraha RDP iyo ku habboonaanta TeamViewer, isagoo ka dhigaya qalab ay kugula talisay Navigaweb.net.
Haddii aan haysanno kombuyuutarro badan oo leh nidaamyo kala duwan oo hawlgal ah oo aan si fog u xakameyn karno, xalka keliya ee gebi ahaanba bilaashka ah iyo furfuran ee aan ku sharxi karno waa DWService, toos loogala socon karo bogga rasmiga ah.
Adeeggan waxaa toos looga isticmaali karaa biraawsarka, ugu yaraan kuwa bixiya gargaarka. Si aan usii wadno waxaan kala soo dagsaneynaa DAWAAN kombiyuutarka (ama kombiyuutarada) lagu caawinayo, ku bilow kombiyuutarka oo fiiro gaar ah u yeelo aqoonsiga iyo lambarka sirta ah ee ku xirnaanta; Hadda aan u tagno kumbuyuutarkeenna, aan ka samaysanno koonto bilaash ah barta aad ku aragto korka oo aan ku darno kombiyuutarka adoo adeegsanaya aqoonsi iyo erey sir ah. Laga bilaabo hadda, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku siino caawimaad furitaanka biraawsar kasta oo aan galno koontadayada, halkaas oo kombiyuutarada fog laga maamuli karo laga arki doono. Maadaama serverka lagu rakibi karo Windows, Mac iyo Linux DWService ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican shirkadaha waaweyn ama kuwa kombiyuutaro badan wata.
Haddii aan dooneyno inaan siino kaalmo fog fog saaxiibbada ama qoyska waxaan sidoo kale adeegsan karnaa adeegga ay bixiso UltraViewer, laga heli karo bogga rasmiga ah.
Waxaan u tixgelin karnaa adeeggan mid Nooca qoraalka LiteViewer, maaddaama ay leedahay isku xirnaan aad u la mid ah iyo qaab isku xirnaan ahaan isku mid ah. Si loo isticmaalo, runti, waa ku filan tahay in laga bilaabo kumbuyuutarka si loo xakameeyo, nuqul aqoonsiga iyo lambarka sirta ah isla markaana u dhex gasho barnaamijka isku xidhka kombiyuutarka kaaliyaha, si aad u awoodo inaad kumbuyuutarka uga maamusho meel dheecaan ah oo aan lahayn xayeysiis daaqadaha ama casuumaadaha si loogu beddelo Pro Version (dhammaan xaddidaadda TeamViewer ee la yaqaan).
Ma jiraan wax kayar oo lagu beddelan karo TeamViewer sidoo kale way fududahay in la isticmaalo loona habeeyo, xitaa kuwa isticmaala layliska ee nooca software-ka ah (runti, kaliya u sheeg aqoonsigaaga iyo lambarkaaga sirta ah kaaliyaha fog si aad u sii wadato). Adeegyada aan ku tusnay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa jawi xirfad leh (marka laga reebo UltraViewer, oo bilaash u ah adeegsiga shaqsiyeed oo keliya), oo bixiya beddel sax ah oo lagu helo shatiga ganacsiga qaaliga ah ee TeamViewer.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyada kaalmada fog, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hagayaashayaga Sida loo shido kombiyuutarka meel fog si looga shaqeeyo meel fog mi Sida kombiyuutarka loogu xakameeyo internetka meel fog.
Haddii taa bedelkeeda aan dooneyno inaan meel fog ka xakameyno Mac ama MacBook, waan aqrin karnaa maqaalkeenna Sida loo xakameeyo shaashadda Mac meel fog.
LibreOffice Calc: bedelka ugu fiican ee Excel
Sida loo furo faylka CSV si sax ah
Sida loo hagaajiyo dejinta kamarada webka (farqiga iyo dhalaalka) Windows PC
Sida loo galo Zoom markaad hesho casuumaad
Ka dhex muuqdo shirarka fiidiyowga oo wata avatar 3D ah oo u dhaqdhaqaaqa sidayada oo kale
Daruuraha ugu fiican ee bilaashka ah si loo badbaadiyo faylasha khadka tooska ah
Ku dar qaanuunka shaashadda PC-gaaga
U beddelo MKV AVI ama gub MKV illaa DVD
Ku samee sawirro sawirro ah iyo sawirro heer-360 ah oo khadka tooska ah iyo kombuyutarkaaga ah PC-gaaga
Isku qas muusikada kumbuyuutarka PC barnaamijyada DJ bilaash ah
Qiimee kombuyutarkaaga kombiyuutarka: gidaarada sawirrada leh sawirro sawir leh, shaashado 3D ah iyo astaamo
Foomka microscope-ka 3D ah oo bilaash ah oo lagala soo dego kombiyuutarkaaga